Mpanamboatra kitapo crossbody - orinasa mpamokatra kitapo kitapo China
Kitapo crossbody T-L5200
TIGERNU vaovao fahatongavana kitapo crossbody avo lenta miaraka amin'ny tahony
Ny vinan'ny mpamolavola ny famolavolana ny harona mpitondra hafatra dia ny hanamora ny fiainan'ny lehilahy
Dimension: 20.5 * 7 * 27cm (L * W * H). Miaraka amina paosy misy zipety efatra, ny zavatra ilainao isan'andro toy ny iPad, finday, penina, banky herinaratra, finday, fanalahidy, kitapom-batsy, dia azo alamina tsara.
Endri-javatra: vita amin'ny haavo avo matevina splashproof sy volo mateza ho fitaovana lehibe sy fika amin'ny polyester 210D. Fehikibo azo ahitsy mifanaraka amin'ny haavon'ny olona rehetra. Fitaovana enti-manana tontolo iainana no mahatonga ny kitapo avo lenta. Ireo zipera rehetra misy logo sy kalitao avo, malefaka ary mipoaka- porofo.
Mavesatra be ihany koa izy io miaraka amin'ny fahafaha-manao lehibe. Safidy tsara amin'ny asa, sekoly, fanatanjahan-tena ary bisikileta.
TIGERNU vaovao famolavolana kitapo crossU TPU avo lenta
Natao hampiasaina isan'andro miaraka amin'ny habe kely izy io, saingy ampy ny toerana ilainao isan'andro. Manana habe 28 * 8 * 14.5cm (L * W * H) izy io, ampy ho an'ny telefaoninao, banky herinaratra, kitapom-batsy, karatra, karatra , tariby sy takelaka sns sns. Amin'ny efitrano lehibe iray sy paosy zipper iray eo anoloana ary iray, azonao atao ny mitazona tsara ny zavatrao.
Ny fitaovana TPU tsy misy rano dia avo lenta, mora diovina sy maina, tsy misy ketrona ary maharitra. Ny zipera dia Tigernu namboarina miaraka amin'ny sary famantarana, porofo mipoaka ary maharitra maharitra.
Kitapo kely, lanja maivana ary safidy tsara hivoahana na hampiarahana. Loko roa misy, mainty sy manga mifanaraka amin'ny lamaodyo.
Misafidiana vokatra Tigernu, manaova fiainana tsara kokoa.
Kitapo crossbody TGN1004
TIGERNU kitapo vita amin'ny hoditra tena izy
Ity kitapom-batsy ity dia vita avy amin'ny volon'ondry ambony kalitao avo lenta, malefaka ary miaina.Ny endriny dia tena miavaka, miaraka amin'ny efitrano lehibe iray ary ny tampon-kavoana misy haingon-trano eo alohany. Izy io dia manana fahaiza-manao lehibe sy fiarovana amin'ny dianao isan'andro.
Ny fehin-tsoroka dia azo ovaina amin'ny famolavolana ergonomika, manampy amin'ny fampihenana ny tsindry ary mahazo aina.
Kitapo crossbody safidy tsara ho an'ny fiainanao isan'andro na fanomezana ho an'ny namanao na olon-tianao izany.
Kitapo miampita kitapo TGN1002
TIGERNU ambony sosona kitapo vita amin'ny hoditra avo lenta
Ny kitapo dia manana habe 17 * 16 * 10cm, miaraka amin'ny efi-trano iray lehibe ary paosy zipper roa eo anoloana, manampy amin'ny fitazomana ny entanao ho voalamina tsara izany.
Ny fitaovana ampiasaina dia hoditra sosona ambony, malefaka sy mamiratra ary mateza ampiasaina. Ireo zipera dia porofo mipoaka sy malefaka ampiasaina. Ny hoditra miloko mena mamirapiratra mahatonga ity kitapo ity ho lamaody sy mangatsiatsiaka kokoa.
Ny fehin-tsoroka dia azo ovaina, mety amin'ny olona lava rehetra. Izy io koa dia azo ampiasaina ho kitapo antsamotady sy kitapo miampita miaraka aminy.
Misafidiana kitapo Tigernu, mifidiana fiainana milamina.
Kitapo crossbody TGN1001
Ny haben'ny kitapo dia 20 * 19 * 20cm, misy efitrano iray sy paosy kely roa eo alohany, manana toerana ampy ho an'ny zavatra ilainao isan'andro ianao, toy ny telefaona, banky herinaratra, tavoahangin-drano sns.
Ny fitaovana ampiasaina dia hoditra sosona ambony, malefaka sy mamiratra ary mateza ampiasaina. Ireo zipera dia porofo mipoaka sy malefaka ampiasaina.
Ity kitapo ity dia azo ampiasaina ho kitapo antsamotady amin'ny kitapo miampita. Safidy tsara amin'ny fiainanao andavanandro, fiantsenana, fanatanjahan-tena, asa, fanomezana ho an'ny olon-tianao.
Kitapo crossbody T-L5105
TIGERNU kitapo mpitondra hafatra mahavita be
Fahazoana: ity haben'ny kitapo sling ity dia 21 * 6 * 24cm (L * W * H). Misy efitrano lehibe misy fantsom-panafody tsy misy tadiny azo apetaka ho an'ny iPad ka hatramin'ny 9.7inch. Izy io koa dia ampy ho an'ny fitaovanao isan'andro, toy ny kitapom-batsy, kahie, banky herinaratra sns paosy zipper roa ho an'ny entana madinidinika sy fidirana mora foana. Paosy miverina miady amin'ny halatra miafina dia tsara ho an'ny entanao manan-danja.
Fitaovana: vita amin'ny splashproof & corch tahan mahatohitra azy, avo lenta, matanjaka ary tia namana. Ny zipera dia namboarina tamin'ny sary famantarana TIGERNU, maharitra sy milamina ampiasaina.
Endri-javatra: ny fehin-tsoroka dia azo ovaina arakaraka izay ilainao. Ny slot iPad dia milomano tsara ary tsy mahazaka. Mitifitra ny zipper ho fanoherana ny halatra.
Ity kitapo ity dia safidy mety indrindra amin'ny fiainanao isan'andro, ny asa, ny komuter, ny dia, ny sekoly.
Kitapo crossbody T-L5102
TIGERNU famolavolana kilasika kilalao avo lenta mpitondra hafatra ho an'ny lehilahy
Ity kitapo mpitondra hafatra ity dia natao ho an'ny tanjona rehetra, mety ho an'ny lehilahy, mpianatra, asa, fitsangatsanganana ary fiainana isan'andro.
• Vita amin'ny Oxford, splashproof & corch tahan mahatohitra, tsy vitan'ny matanjaka fa tia namana ihany koa
• Ny habeny dia 21 * 6 * 26cm (L * W * H), vatana kely nefa mahazaka lehibe. Efitra lehibe iray misy slot misy takelaka tsy misy fangarony mifanaraka amin'ny iPad 9.7 .It. Malalaka ihany koa izy ho an'ny entanao isan'andro. paosy iray lamosina tsara ho an'ny entana madinidinao sy fidirana mora.
• Famolavolana fanoherana fangalarana, miafina sy tsy hita ny zipera paosy anoloana sy aoriana, mahatonga ny zavatrao ho azo antoka kokoa
• Ny halavan'ny tady dia azo ovaina arakaraka ny filanao
• Mavesatra maivana, 0,28kg fotsiny ny lanjan'ny kitapo, tsy hampiakatra ny enta-mavesanao izany rehefa feno entana tanteraka
Ny kitapo antsamotady TIGERNU dia manome anao traikefa mitafy tsara miaraka amina endrika marobe. Tongava miantsena amin'ny TIGERNU, tsy ho diso fanantenana mihitsy ianao amin'ny kitapo TIGERNU sy ny serivisy omeny.
TIGERNU kitapom-batsy somary manify sy maivana
Ity kitapo tratra ity dia mpiara-dia aminy tonga lafatra miaraka amina endrika marobe
• Volavola manify miaraka amin'ny fahafaha-lehibe, ny habeny dia 18 * 9 * 35cm, mety amin'ny takelaka 9.7 ″ sy ireo entana hafa isan'andro.
• Vita amin'ny PU avo lenta, matanjaka, maharitra ary tia namana
• Efitra lehibe iray, paosy zipper iray eo anoloana ary paosy miverina ao ambadika iray, tazomy ny zavatra rehetra voalamina tsara sy mora idirana.
• Fiarovan-tena bebe kokoa, efitrano lehibe mihidy miaraka amina amboara, manome fiarovana ny entanao
• fehezan-tsoroka azo ovaina
• Mavesatra maivana, 0,6kg fotsiny
Ity kitapo antsamotady ity dia safidy mety indrindra amin'ny fiainanao isan'andro, bisikileta, fanatanjahan-tena, fitsangatsanganana.
• Volavola manify miaraka amin'ny fahaizany lehibe, ny habeny dia 19 * 9 * 33cm, mety amin'ny takelaka 9.7 ″ sy ireo entana hafa isan'andro.
• Vita amin'ny polyester avo lenta splashproof & Scratch, mafy orina, maharitra ary tia eco
• Mavesatra maivana, 0,3kg ihany no lanjany
Kitapo antsamotady matevina sy maivana Tigernu
• vita amin'ny kalitaon'ny splashproof & scriber tahan'ny kalitao, mafy orina, maharitra ary tia eco
• Mavesatra maivana
TIGERNU kitapo fanatanjahan-tena mahazatra fanatanjahan-tena
Ity kitapo crossbody ity dia natao hametrahana set ho an'ny kitapom-batsy TIGERNU T-B3351.
Fitaovana: vita amin'ny vovoka Oxford sy splashproof izy io, maharitra, manohitra ny triatra, eco-friendly. Ny ziper dia namboarina niaraka tamin'ny sary famantarana TIGERNU, avo lenta sy anti-rusting, porofo mipoaka, malefaka ampiasaina.
Fahafahana: ny efitrano lehibe misy paosy 7 an'ny olona, ​​ampy ho an'ny iPad 7.9 ″, banky herinaratra, telefaona, kitapom-batsy, boky naoty, tavoahangin-drano sns.
Kitapo antsamotady an-tanàn-dehibe tonga lafatra izy io, mety tsara amin'ny fiainanao andavanandro. Ny fehin-tsoroka dia azo ovaina amin'ny halavany sy amin'ny ilany havia na havanana. Fomba tsy manam-paharoa ho an'ny mpianatra, lehilahy, vehivavy, fitsangatsanganana, asa, fanatanjahan-tena, bisikileta.
TIGERNU kitapo antsamotady misy tanjona maro
Kitapo antsamotady ity dia kitapo famolavolana manokana, azo ampiasaina ho kitapo na kitapom-batsy miaraka amin'izay.
Fahafahana: Ny haben'ny kitapo tratra dia 17 * 10 * 30cm (L * W * H), mety ho an'ny 9.7 ″ iPad. Ny efitrano lehibe dia manana fahaiza-manao lehibe miaraka amina paosin-zipper kely mety ho an'ny kahie, telefaona, banky herinaratra, kitapom-batsy, rano sy ny sisa. Misy paosy aloha 2 misy zipper tsara ho an'ny peninao, fanalahidy, telefaona, taribinao sns. Ny paosy miady amin'ny fangalarana RFID miady amin'ny laoniny dia mety tsara amin'ny zava-tsarobidinao toy ny karatra banky, telefaona.
Kalitao: ny kitapo tratra dia vita amin'ny lamba nilona + tena mateza + tena hoditra, izay mateza sy sariaka amin'ny tontolo iainana, miaraka amin'ny lamaody kokoa. Ny zipera dia porofo mipoaka avo lenta ary tena milamina ampiasaina. Ny buckles dia namboarina tamin'ny logo TIGERNU, endrika lamaody maharitra.
Endri-javatra: ny fehin-tsoroka zipper dia azo ovaina ary azo ampiasaina ho kitapom-batsy araka izay ilainao. Izy io koa dia azo ovaina ankavia na miankavanana dia miankina amin'ny fahazarana anao. Azo ampiasaina ho toy ny kitapo soroka tokana, kitapo, kitapo antsamotady eo alohany na amin'ny ny lamosina.
Ny seranan-tsambo USB ivelany dia manome fahafaha-mikafatra amin'ny famandrihana ny fitaovanao amin'ny fotoana rehetra nefa tsy manala ny banky herinao ary ny lavaka fanenon-tsofina dia ahafahanao mankafy ny mozika rehefa mandeha bisikileta na jogging na manao spaoro ianao.